Ii-FAQs - iSuzhou Industrial Park Haiermei Knitting Garments Co., Ltd.
Dinga uncedo? Qiniseka ukuba undwendwela iiforamu zethu zenkxaso yeempendulo zemibuzo yakho!
Ngaba ndingayalela isampulu enye ukujonga umgangatho?
Ewe, uku-odolwa kwesampulu kubalulekile kwaye kwamkelekile.
Ngaba ndingazenza iimveliso ngoyilo lwethu okanye ilogo yophawu kwimveliso?
Ewe, ungenza ngokusesikweni uyilo lwakho, ilogo, ileyibhile kwiimveliso.
Ukuba ubungakanani beodolo buncinci kakhulu, njengeziqwenga ezingama-50-100 ngesitayile ngombala ngamnye.
Ewe singayenza, ukuba sinezitokhwe ezaneleyo zamasheya e-odolo yakho.
Ngaba unazo izinto ezenziwayo zokushicilela nokuhombisa?
Ewe siyakwenza, ufuna nje ukusithumela ubeko / umsebenzi wobugcisa okanye umbono wakho kwaye sinokwenza ngokwesiko ngokufanelekileyo.
uya kufumana ixesha elingakanani iisampulu kuthi?
Abathengi abatsha, emva kokuba uhlawule iindleko zeesampulu, uya kufumana iisampulu zethu ukusuka kwiintsuku ezi-3 ukuya kwezi-7; Kubathengi abaqhelekileyo, emva kokuba sifunde umyalelo wakho, uya kufumana iisampulu zethu ukusuka kwiintsuku ezi-3 ukuya kwezi-7
Leliphi ixesha lokuhambisa onokulinikela? Njani ngexesha elikhokelayo elininzi?
Isampulu kunye noku-odola okuncinci, kuthatha i-DHL / Fedex / i-UPS / i-EMS malunga neentsuku ezi-3-7 zokusebenza .Ngobuninzi, ixesha elikhokelayo lifuna malunga ne-35-45 yeentsuku, kunye noku-odola ngobuninzi ngolwandle, kuhlala kuthatha iintsuku ezili-15 ukuya kwezi-30 ukufika izibuko lomthengi.
Loluphi uhlobo lwexesha lokuhlawula odla ngokurhweba ngalo?
Imigaqo yethu ephambili yokuhlawula yi-T / T. sisebenzisa abanye ixesha, kodwa bambalwa .Ukuze ufumane i-odolo enkulu, i-30% idiphozithi xa ufaka iodolo, intsalela engama-70% yentlawulo kufuneka ihlawulwe ngokuchasene nekopi ye-B / L.